Praiminisitra Mahafaly Olivier : Nanome baiko ireo minisitra hamita ny PTA -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Mahafaly Olivier : Nanome baiko ireo minisitra hamita ny PTA
26/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Anisan’ny nisongadina nandritra ny fampitam-baovaon’ny filan-kevitry ny governemanta notanterahina omaly, ny fanomezan’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier baiko ho an’ireo minisitra mpikambana eo anivon’ny governemanta amin’ny famitan’izy ireo faran’izay haingana ny Programan’asa isan-taona eo anivon’ny minisitera tsirairay sy ny tatitry ny asan’izy ireo.
Izany no noraisina noho ny fiatombohan’ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny parlemanta amin’ity taona 2017 ity. Marihina mantsy fa hanomboka ny 7 Mey izao ny fivoriana ara-potoana eo anivon’ny Atenimieram-pirenena ary haharitra 60 andro.
Araka izany, hatolotra ny parlemanta mandritra ny fivoriana ara-potoana ny tatitry ny asa vita sy ny PTA eo anivon’ireo minisitera tsirairay. Hatolotr’ireo minisitra mandritra izany ihany koa ireo volavolan-dalàna holaniana avy amin’izy ireo.
Anisan’ny hodinihin’ireo depiote ihany koa ny volavolan-dalàna ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, ny lafiny sosialy ary indrindra indrindra ny lafin’ny fandriam-pahalemana.
Ankoatra izay, raha ny mikasika ny feo haely sy ny tsaho mivoaka manodidina ity fivoriana ara-potoana voalohan’ny parlemanta ity amin’ny fanonganana ny governemanta indray, voamarina ny tsy fisian’izany, araka ny fanadihadiana natao. Tsy laharam-pahamehan’ireo depiote velively izany. Raha ny marina mantsy, voizin’ireo depiote avy amin’ny antoko mpanohitra, vitsy an’isa, izany fanonganana governemanta izany, nefa tsy ao anatin’ny fandaharam-potoam-pivoriana velively izany.
Araka izany, somary hafampana ny adihevitra mandritra ny fivoriana amin’ity indray mitoraka ity.
Hentitra ny fanambarana nataon’ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana taorian’ny fahatratrarana ny sambo “Lumina” nikasana hanondranana an-tsokosoko ireo andramena miisa 340. “Tsy tokony ho olom-bitsy no hisitraka ny harena sarobidy eto Madagasikara fa ny vahoaka malagasy. ...Tohiny